Mpanamboatra varimbazaha - Mpamatsy sy orinasa mpihaza ao Shina
Kitapo Squid Shrimp Hazo-Knife
Kodiarana lehibe fanjonoana trondro CC spinning fishing 8000 kodiarana fanjonoana tsara indrindra
2.Reel karazana: Reel mihodinkodina - Io no safidy ilain'ny mpanjono maro, na manjono manjono eny ambonin'ny farihy izy ireo na mikendry tarpon manamorona ny morontsiraka. Ny fomba fanodinanao kodiarana dia ny familianao ny tariby vy, izay mamoaka ny tsipika ho an'ny mpilalao.
3. Taratry ny fitiavana: 4: 8: 1
4. Orientation amin'ny tanana: azo ovaina ny orient orientation-tanana
Kodiarana jono lehibe SH 8000 10000 12000 kodiarana jono mihodina
1.Fomba fanjonoana: Fanjonoana manjono an-dranomasina sy jono
3.Bola Bearings: 6 + 1
4. Gatio Ratio: 4.6: 1
5. Orientation amin'ny tanana: azo ovaina ny orient orientation-tanana
Fanjonoana an-dranomasina any Ocean Beach
1.Fomba fanjonoana: Fanjonoana an-dranomasina sy fanjonoana an-dranomasina
2.Fampisehoana: Mahery - Manolora hery mampiato tsy mampino. Izy io dia manana hazo goavam-be vita amin'ny metaly matevina, fitaovana familiana harato tonga lafatra. Aleo misafidy kofehy 2000 sy 3000 raha toa ka manjono amin'ny rano velona ianao. Raha manenjika trondro vaventy na karazana sira ianao, 4000 na ambony dia safidy tsara kokoa
3.Reel karazana: Reel mihodinkodina - io no safidy ilain'ny mpanjono maro, na manjono manjono eny ambonin'ny farihy izy ireo na mikendry tarpon manamorona ny morontsiraka. Ny fomba fanodinanao kodiarana dia ny familianao ny tariby vy, izay mamoaka ny tsipika ho an'ny mpilalao.
4.Bola Bearings: 4 + 1BB
5.Grefy Ratio: 5.2: 1
6. Orientation amin'ny tanana: azo ovaina ny orient orientation tanana
Fanjonoana miharo volo fihodinana fihodinana fihodinam-bokin'ny AR
DW Fanjonoana mikodiadia mampiasa kodiarana jono amidy kodiarana jono
3.Ny isan'ny Gear: 6.7: 1
Ambongadiny 5.2: 1 AR Manodinkodina fanjonoana anaty rano manjono farihy feno vy
1.Fomba fanjonoana: Casting Bait ankapobeny
3.Gatio Ratio: 5.2 / 1
FBE Fanjonoana fanjonoana rano mangarom-bokatra manjono kofehy
3. Fitaovana fitondra: 4.7: 1 / 5.0: 1
Ambongadiny Long Cast JS Fishing Reel Havia sy Havanana Ampifamadiho Fanjonoana jono Fishingreel
1.Fomba fanjonoana: Jono manjono trondro Bass
2.Fitaovana: Ultra Smooth - Maro ny kalitao ary kalitao avo lenta no manome azy milamina tsara., Mahery - Manolora hery mampiato tsy mampino. Izy io dia manana hazo goavam-be vita amin'ny metaly matevina, fitaovana familiana harato tonga lafatra. Aleo misafidy kofehy 2000 sy 3000 raha toa ka manjono amin'ny rano velona ianao. Raha manenjika trondro vaventy na karazana sira ianao, 4000 na ambony dia safidy tsara kokoa
4. Gatio Ratio: 5.2: 1
GX Metal Spinning Wheel Reel 8000-12000 Aluminium Big Abu Fishing Surf Reel
1.Fomba fanjonoana: jono ankapobeny2.
Karazana Reel: Reel Spinning - Safidin'ny safidy ho an'ny mpanjono maro izany, na manjono manjono eo amin'ny farihy izy ireo na mikendry tarpon manamorona ny morontsiraka. Ny fomba fanodinanao kodiarana dia ny familianao ny tariby vy, izay mamoaka ny tsipika ho an'ny mpilalao.
3.Bola Bearings: 11 + 1BB
4. Gatio Ratio: 4.7: 1
Fivarotana mafana mihodinkodina.
3.Bola Bearings: 9 + 1BB
4. Tomban'ny Gear: 5.1: 1 / 5.5: 1
Mihodinkodina Reel feno metaly an-dranomasina karpa FB mihodinkodina dragona Fishing Fishing Reel
3.Bear Bearings: 5 + 1BB
4. Gatio Ratio: 4.1: 1
Fanjonoana fanjonoana FB8000-12000 fantsom-boaloboka vy lehibe: fanjonoana haingony 4.1: haingam-pandeha haingam-pandeha avo haingam-pandeha
Adiresy:No.1, Liaohe Zhonger Road, Zone fampandrosoana ara-toekarena sy teknolojia Dalian